Nin horey u qabey Cudurka HIV-AIDS-ka oo lagu magacaabo Jaamac hadana ku sugan magalada Kismayo ayaa waxaa uu shegay in laga daweeyey Cudrkii uuna Rasytey, isla markaasna uu yahey nin iska shaqeysta oo danhiisa raacda ilaa intii uu bosadeyilaa hada.
Jaamac oo ah ninka ka sheekeeyey qaabkii uu Cudurka HIV-AIDS-ka ku haleeyey isago dhalinyaro ah ayuu ku soo koobey haasawe, ka dibna waxaa uu shegay in uu noqdey nin niyada iyo jirkaba ka jiran ilaa uu noqdey mid isla hadla oo gabey wixii uu qabsan jirey oo dhan isla meelo badana u tagey daawo uu ka helo waxna looga qaban waayey dhamaantood ayaa ugu danbeyntii kismayo looga daweeyey.
Ugu danbeyntii jaamac ayaa shegay in Magaalada kismaayo ee Xarunta Jubbada Hoose uu kula kulmey Shiikh lagu magacaabo Shiikh Maxamuud Bukhaari kas oo siiyey Daawo dhireed uu isticmaalayey ilaa 45 Maalmood oo xiriira uuna markiiba ka dareeemay jirkiisana uu fudeyd ka dareemay, taas oo quraan uu la socdey ilaa markii danbe mudo lagu siiwadey dawadii uu bilaabey in uu miisaankiisa kor u soo kaco oo gaaro 65 Kiilo. halka markii hore uu ka ahaa ilaa 50 kiilo.
sidoo kale waxaa uu shegay in mudo bilooyin ka dib ah uu bilaabey in uu sameeyo baaritaano caafimaad kuwaas oo uu ku sameeyey Gobolada Somaliya Qaarkood oo uu tagey iskagana baarey Cudurka HIV-AIDS-ka oo laga waayey.
Jaamca ayaa Waxaa uu sheegay in ugu danbeyntii uu aaadey Dalka kenya oo uu iskaga soo barey Cudurka HIV-AIDS-ka lagana soo waayey isla markaas uu ka dawoobey uuna uga mahacd Celinayo ALLAH iyo Shiikha Lagu magacaabo Shiikh lagu magacaabo Shiikh Maxamuud Bukhaari .
sidoo kale mar shiikha uu saxafada la hjadley ayuu shegay in ay jirto arintan oo ay ALLAAH ula kashadeen daweynta Cudurkaa ayna ka daweeyaan dad badan oo qabey hadan ay joogaan kismayo balse ay dadka kale yihiin kuwo sidaan oo kale sifiican ugu reystey dawooyinkii iyo quraankii lagu aqriyey.
cidii dooneysan hala soo xiriiraan Shiikh Maxamuud Bukhaari Tel:0618350669.